I-CAS 13103-34-9 Injectable Anabolic Steroids Hormones Boldenone Undecylenate Powder
Umthombo we-Raw Boldenone Undecylenate Equipoise Liquid
Ukusetshenziswa:I-Boldenone Undecylenate(Equipoise) iyinhlanganisela ye-steroid enganikeza abasebenzisi ukuzuza kancane kodwa okuqinile phakathi nomjikelezo.Kuphephile futhi kuqhathaniswa nemibiko embalwa kakhulu yemiphumela emibi ebangelwa ukuguqulwa kwe-testosterone ku-estrogen.
Indlela yokusebenzisa i-Equipoise?Imiphi Imithamo Okufanele Uyisebenzise?
I-Equipoise isetshenziswa abasubathi nabakhi bomzimba ukwandisa ukukhuthazela, imisipha yemisipha kanye nokukhiqizwa kwamangqamuzana egazi abomvu emzimbeni.Kwaziwa kakhulu ngokuhlinzeka ngezinzuzo ezihamba kancane kodwa eziqinile phakathi nemijikelezo yokunqwabelana (ngokuvamile ebizwa ngokuthi i-EQgains).I-EQ ingasetshenziswa kumithamo esukela ku-200mg kuya ku-600mg ngesonto isikhathi eside esingamaviki ayi-12.
Eminyakeni yamuva nje, i-equipoise isiyintandokazi phakathi kwama-powerlifters futhi ibhekwa abaqeqeshi njengendlela ekahle yokuthatha indawo ye-deca durabolin.Lokhu kungenxa yokuthi ikhwalithi yesisindo semisipha namandla atholakalayo ngenkathi ku-equipoise kwenzeka ngaphandle kwemiphumela emibi ye-deca.Futhi, i-EQ inomphumela omuhle ekujikelezeni kwegazi emzimbeni;okuvumela ukukhukhula kwegazi okukhulu emisipha ngesikhathi sokuqeqeshwa okuqinile.
Ekusetshenzisweni kwezokwelapha, i-equipoise ingathuthukisa i-erythropoietin (EPO) stimulating factor, yona, evuselela ukukhula komnkantsha wamathambo okuholela ekwandeni kokukhiqizwa kwamangqamuzana abomvu egazi.Amangqamuzana egazi abomvu engeziwe asho i-hemoglobin eyengeziwe, namandla aphezulu okuthwala umoya-mpilo.I-EQ ingase futhi ibangele izinguquko kumazinga e-electrolyte ngenxa yezakhiwo zayo ezinamandla ze-mineralocorticoid.
Kwabesilisa, isilinganiso sesilinganiso singama-400-600mgs ngesonto, kodwa ngibone abafana bekhuphukela ku-1000mgs ngesonto inqobo nje uma kusetshenziswa izinsiza zomjikelezo.
Kwabesifazane, isilinganiso sesilinganiso singama-25-50mgs ngesonto, kodwa kufanele uqaphele kakhulu.Uma ubona imiphumela emibi enzima, yeka i-EQ noma imithamo ephansi.?
Amanye ama-Equipoise Cycles
I-Equipoise iguquguquka kakhulu, ingasetshenziselwa kokubili imijikelezo yokusika kanye nobuningi.Phakathi nemijikelezo yokusika ipakishwe nge-trenbolone kanye ne-winstrol.Ngenkathi phakathi nemijikelezo yobuningi i-EQ ihlanganiswe ne-dianabol ne-testosterone (cypionate noma i-enanthate).Kungumqondo omuhle ukusebenzisa izinsiza zomjikelezo ngokugijima kwakho kwe-EQ, kokubili i-cardarine (GW-501516) kanye ne-N2Guard iyadingeka.Ngaphezu kwalokho, i-aromatase inhibitor (AI) efana ne-aromasin noma i-arimidex iyadingeka nge-boldenone.
1 I-Testosterone Enanthate CAS: 315-37-7
2 I-Testosterone Acetate I-CAS: 1045-69-8
6 Testosterone Isocaproate I-CAS: 15262-86-9
9 I-Sustanon 250
11 I-Turinabol CAS: 855-19-6
12 I-Oral Turinabol I-CAS: 2446-23-3
13 I-Stanolone CAS: 521-18-6
14 I-Nandrolone Decanoate (DECA) I-CAS: 360-70-3
15 I-Nandrolone Cypionate I-CAS: 601-63-8
16 I-Nandrolone Phenypropionate (NPP) CAS: 62-90-8
17 I-Boldenone Acetate CAS: 2363-59-9
18 I-Boldenone Undecylenate (Equipoise) I-CAS: 13103-34-9
19 I-Drostanolone Propionate (Masteron) CAS: 521-12-0
20 I-Drostanolone Enanthate CAS: 472-61-1
21 I-Methenolone Acetate (Primobolan) CAS: 434-05-9
22 I-Methenolone Enanthate CAS: 303-42-4
23 I-Trenbolone Acetate I-CAS: 10161-34-9
24 I-Trenbolone Enanthate
25 Trenbolone Hexahydrobenzyl Carbonate I-CAS: 23454-33-3
28 I-Anadrol CAS: 434-07-1
29 Winstrol I-CAS: 10418-03-8
31 I-Superdrol CAS: 3381-88-2
32 I-Tamoxifen Citrate (Nolvadex) I-CAS: 54965-24-1
33 I-Clomiphene Citrate (i-Clomid) CAS: 50-41-9
34 I-Toremifene Citrate (Fareston) I-CAS: 89778-27-8
35 Femara I-CAS: 112809-51-5
36 I-Aromasin I-CAS: 107868-30-4
37 I-Proviron I-CAS: 1424-00-6
38 I-Arimidex I-CAS: 120511-73-1
40 I-Cabergoline (Fit) I-CAS: 81409-90-7
41 I-Finasteride CAS: 98319-26-7
42 I-Dutasteride I-CAS: 164656-23-9
43 I-Ostarine (MK-2866) I-CAS: 841205-47-8
44 I-Cardarine (GW-501516) I-CAS: 317318-70-0
45 I-Andarine (S4) I-CAS: 401900-40-1
46 I-Ligandrol (LGD-4033) I-CAS: 1165910-22-4
47 I-Ibutamoren (MK-677) I-CAS: 159752-10-0
48 I-RAD140 I-CAS: 118237-47-0
49 I-SR9009 I-CAS: 1379686-30-2
50 YK11 I-CAS: 431579-34-9
51 I-Avanafil I-CAS: 330784-47-9
52 I-Vardenafil I-CAS: 224785-91-5
53 I-CAS: 119356-77-3
54 I-Tadalafil I-CAS: 171596-29-5
56 I-Vardenafil Hydrochloride I-CAS: 431579-34-9
57 IHydrochloride I-CAS: 431579-34-9
58 I-Yohimbine Hydrochloride CAS: 65-19-0
1.Ngemikhiqizo ethunyelwa ngaphandle singanikeza Isitifiketi se-COA kanye ne-PI esemthethweni.
I-2.Singabakhi abanelebhu kanye nefekthri, singahlinzeka ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu ngentengo yefekthri.
I-3.Imikhiqizo ingathunyelwa emahoreni angama-24 ngemuva kokukhokha.Inombolo yokulandelela etholakalayo, umuntu wesevisi engashintshi ngu-7x24h ongamthinta.
4.Ukuthunyelwa okuvikelekile futhi okuhlakaniphile.Izindlela zokuthutha ezahlukahlukene ozikhethayo, njenge-DHL/UPS/TNT/FedEx/SF-express.
I-5.Customs pass kanye nezinga eligculisayo ≥99%.
I-6.Ngemikhiqizo edayiswayo eshisayo sinesitoreji lapho ukuze sidluliselwe.
7.Ukuhlanzeka kwemikhiqizo kuhlolwa umnyango wethu wekhwalithi ngaphambi kokuyithumela, futhi ungacela inhlangano yesithathu yokuhlola ukuthi ize izohlola, njengokuthi (i-SGS/ CTI/ ITS), kuphela ngemva kokuqinisekisa kwethu esiyokuthumelela yona.
8.Sinezithunywa ezihlukene eziya emazweni ahlukene.
9.Sinamakhasimende emhlabeni jikelele.
Sicela ucacise ukuthi yimuphi umkhiqizo kanye nenani elidingekayo
Amanani nemininingwane yokucaciswa izonikezwa ukuze uyicabangele futhi uqinisekise
Ukudluliselwa Kwebhange, i-Western Union, i-Money Gram ne-Bitcoin
Wonke ama-Express Modes(EMS, DHL, TNT, FedEx, UPS, njll.)
Nikeza imininingwane yekheli lakho elivumelekile nelilungile (uma kungenzeka ngekhodi yeposi, inombolo yocingo).
Khetha izindlela ezingcono kakhulu ngokuya ngenani nedigri yokuphepha (Isihlakaniphi esikhulu, esichwepheshile nesinolwazi)
Phakathi namahora angu-8 ngemva kokuthola inkokhelo
Izithombe zephakheji zizonikezwa ukuhlukanisa izinto
Inikelwa uma isikhishiwe
3-7 izinsuku zokusebenza (Door-to-Door)
24/7 Ku-inthanethi nganoma yiziphi izinkinga
Okwedlule: I-Muscle Growth Raw Hormone Drost E Master 100% Isiqinisekiso Sokuthunyelwa
Olandelayo: I-Top Notch Boldenone Undecylenate Raw Steroid Supplier With Shippment Fast
I-Bold Undecylenate Powder
I-Boldenone Undecylenate Powder
i-steroid powder eluhlaza
I-Steroid Powder Hormone